अप्रिलमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
अप्रिलको अन्तमा, गोरियोकाकु पार्कमा घुम्न जाने पर्यटकहरू, सुन्दर चेरी फूलहरू, हकोडाटे, होक्काइडो = शटरस्टक हेर्दै
जापान मा अप्रिल! हिउँ परिदृश्य, चेरी फूल, नेमोफिलिया .... >
यस पृष्ठमा, म अप्रिल महिनामा होक्काइडोको मौसमको बारेमा कुरा गर्ने छु। होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। होक्काइडोमा, हिउँ अझै अप्रिलमा पनि पस्न सक्छ। यो दिनको समयमा धेरै तातो हुन्छ तर कहिले कत्ति धेरै चिसो हुन्छ, त्यसैले सावधानी रहनुहोस्। यस लेखले धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई होक्काइडोको अप्रिलमा मौसम कल्पना गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तल अप्रिलमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
अप्रिलमा होक्काइडोको बारेमा प्रश्न र उत्तर
अप्रिलमा होक्काइडोमा मौसम (अवलोकन)
अप्रिलको सुरूमा होक्काइडो मौसम
होक्काइडो अप्रिलको बीचमा मौसम
अप्रिलको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा अप्रिलमा हिउँ पर्दछ?
अप्रिलको पहिलो आधामा असहिकावा र सप्पोरो जस्ता केही शहरहरूमा हिउँ पर्न सक्छ। यद्यपि, सहरी क्षेत्रमा, तपाईंलाई सामान्यतया हिउँले ढाकिएको परिदृश्यहरू फेला पार्न गाह्रो हुनेछ। अर्कोतर्फ, हिउँ अझै पहाडहरूमा खस्दछ। तपाईं अझै निसेको र अन्य स्की रिसोर्टहरूमा जाडोका खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
अप्रिलमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ?
होक्काइडोको तापमान बिस्तारै अप्रिलमा बढ्नेछ। मध्य अप्रिलमा, दिनको अधिकतम तापमान १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। सप्पोरो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा अप्रिलको आखिरमा वसन्त .तुको साथसाथै चेरी फूलहरू फूल्न थाल्छन्।
अप्रिलमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ?
अप्रिलको सुरूमा, तपाइँलाई कोट र पन्जा चाहिन्छ। हिउँ जुत्ता स्नीकर्स भन्दा राम्रो छ। मध्य अप्रिलमा, स्नीकर्स ठीक हुनेछ। अप्रिलको अन्तसम्ममा, तपाईंलाई कोट वा पन्जाको आवश्यक पर्दैन। तपाईंले अझै पनि जम्पर ल्याउनु पर्छ। हिमाल र शिरेटोकोमा, अप्रिलको अन्तमा पनि कोट र पन्जा आवश्यक छ।
जाडो र वसन्त अप्रिल मा होक्काइडो मा एक साथ रहन्छ। त्यसोभए कस्तो किसिमको कपडा लगाउने भनेर निर्णय गर्न निकै गाह्रो छ। सामान्यतया, म सुझाव दिन्छु कि तपाइँले कोट ल्याउनुहोस्। जाडो र वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं हिउँदमा चिसो परिदृश्यको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी भ्रमणका लागि उत्तम महिनाहरू हुन्। यदि तपाईं सुन्दर फूल फाँटहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने जुलाई र अगस्त उत्तम हुन्।
अप्रिलमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: अप्रिलमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ, अप्रिलमा होक्काइदोमा हिउँदबाट वसन्त toतु परिवर्तन हुन्छ।
अप्रिल २,, २०१:: प्रो। विलियम एस क्लार्क विश्वविद्यालयको अगाडि स्मारक स्मारक र हिट्सुगीगाका अवलोकन हिल दृश्यमा शटस्ट्रक
अप्रिल १०, २०१10,2017: जाडोमा निसेको, होक्काइडो = शटरस्टकमा स्की रेसमा सामेल हुने समूह
अप्रिलमा, टोकियो र ओसाकामा चेरी खिलिन थाल्नेछ। त्यस पछि रूखहरू र घाँसहरू सुन्दर हरियो रंगमा परिणत हुनेछन्। यद्यपि होक्काइडोमा चेरी फूलहरू यस समयमा खिलदैनन्। यसको विपरित, अप्रिलको सुरूमा, कहिलेकाँही यो जापानको समुद्रको नजिकै पश्चिमी भागमा सुग्दछ। यदि हिउँ पर्दैन भने पनि, बिहान र बेलुका अझै पनि धेरै चिसो छ। मलाई लाग्छ कि तपाईंलाई अझै कोट वा जम्पर चाहिन्छ।
होस्टैडोमा पनि हिउँदको अवधि रहँदैन। यदि हिउँ पर्यो भने पनि त्यसले ढिलो गर्दैन। दिनहरू जुन १० डिग्री सेल्सियस पार गर्दछ अधिक सुसंगत हुन्छन्। अप्रिलको दोस्रो आधामा, दिनमा तापमान स्थिर रूपमा बढ्दछ र २० डिग्रीभन्दा बढी हुन सक्छ। यस समयमा, चेरी फूलहरू अन्ततः फूल्छन्।
बिहान र साँझ १० डिग्री भन्दा कममा चिसो हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन, यो दिनको समयमा २० डिग्री भन्दा बढि भए पनि। यो तापमान भिन्नता होक्काइडोमा तीव्र छ। त्यसोभए, म तपाईंलाई सिफारिश गर्छु कि तपाईं न्यानो कोट लिएर आउनुहोस्।
यस समयमा पनि हिउँ पर्वतीय क्षेत्रमा रहन्छ। त्यसोभए स्की रिसोर्ट्समा तपाईं जाडो खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तपाईं होक्काइडोको केन्द्रमा अवस्थित हिमाली क्षेत्र, डेसेट्सुजानमा हिउँको संसार पनि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
तल जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले जारी गरेको होक्काइडोको अप्रिलको मौसम डेटा छ।
तपाईं यो डाटाबाट देख्न सक्नुहुन्छ कि कुनै खास दिनमा तापमान फरक चरम हुन सक्छ। होक्काइडोको नक्शा ..
होक्काइडोमा मौसम डाटा (अप्रिलको सुरुमा)
साप्पोरो २.10.2..1.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 16.6mm (9 सेमी)
ओटारु २.8.4..1.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 18.1mm (12 सेमी)
Asahikawa 8.9 ℃ (-1.8 ℃) 13.7mm (15 सेमी)
Biei 7.0 ℃ (-3.5 ℃) 14.5mm (20 सेमी)
फुरानो 8.1 ℃ (-2.4 ℃) 15.6mm (18 सेमी)
Wakkanai २.5.5..0.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 11.4mm (14 सेमी)
अबाशिरी 6.8 ℃ (-1.0 ℃) 16.7mm (13 सेमी)
उटोरो 5.8 ℃ (-1.7 ℃) 22.9mm (26 सेमी)
नेमुरो 5.6 ℃ (-0.9 ℃) 18.9mm (7 सेमी)
Kushiro 6.1 ℃ (-1.0 ℃) 20.1mm (5 सेमी)
ओबिहिरो 9.7 ℃ (-1.1 ℃) 14.6mm (5 सेमी)
Hakodate २.10.2..1.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 17.2mm (3 सेमी)
अप्रिल,, २०१:: सापोरोमा जाडोमा पर्यटकहरूको साथमा होक्काइडो तीर्थ (होक्काइडो जिंगु) को प्रवेश द्वार। होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
अप्रिलको सुरुमा, चेरी फूलहरू टोकियो, ओसाका र क्योटो जस्ता दक्षिणका प्रमुख शहरहरूमा पर्न थाल्छन्। जे होस्, यो अझै होक्काइडोमा चिसो छ। अधिकतम दिनको तापक्रम अन्तमा १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। शहरी क्षेत्रहरुमा हिउँ हराउँदछ, तर बिहान र साँझ जाडो छ त्यसैले तपाईंलाई कोट चाहिन्छ।
अप्रिलको सुरुमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :5:११ र सूर्यास्त समय १ 11:०18 हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :4::54 हो र सूर्यास्तको समय लगभग १:17: is48 छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (अप्रिलको मध्य)
साप्पोरो २.11.5..3.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 19.2mm (2 सेमी)
ओटारु २.10.7..2.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 18.2mm (3 सेमी)
Asahikawa 11.7 ℃ (-0.1 ℃) 15.3mm (7 सेमी)
Biei 10.1 ℃ (-1.5 ℃) 15.6mm (9 सेमी)
फुरानो 11.0 ℃ (-0.4 ℃) 18.0mm (7 सेमी)
Wakkanai २.7.1..1.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 18.4mm (6 सेमी)
अबाशिरी २.9.0..0.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 13.6mm (4 सेमी)
उटोरो 8.1 ℃ (-0.4 ℃) 27.3mm (14 सेमी)
नेमुरो २.7.1..0.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 15.6mm (5 सेमी)
Kushiro २.7.5..0.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 22.7mm (3 सेमी)
ओबिहिरो २.11.8..0.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 20.8mm (3 सेमी)
Hakodate २.11.6..2.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 24.4mm (1 सेमी)
अप्रिल १,, २०१ H होक्काइडो इतिहास विकास स्तम्भ, घोडा तान्ने रेल ग्राहकहरु संग चल्छ, घोडा तान्ने रेल रेलको दृश्य र टाउनस्केप = शटरस्टक
अप्रिल १,, २०१18,2014: अज्ञात व्यक्तिहरू होक्काइडो, जापानको माउन्ट डेसेत्सु भ्रमण गरिरहेका थिए। स्नोबोर्डको साथ एक सुन्दर हिउँदको मजा लिन, होक्काइडो = शटरस्टक
मध्य अप्रिलमा होक्काइडोमा दिनको अधिकतम तापक्रम २० डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्छ तर त्यहाँ चिसो दिन पनि छ। मध्य अप्रिलमा, त्यहाँ सहरहरू छन् जहाँ बिहान र साँझको कम तापक्रम फ्रिजभन्दा कम हुन्छ। तापमान फरक चरम छ त्यसैले म तपाईंलाई कोट वा जम्पर ल्याउन सिफारिश गर्दछ यदि तपाईं रातमा बाहिर जान चाहनुहुन्छ भने।
हिमाली क्षेत्र र स्की रिसोर्टहरूमा तपाईं अझै हिउँको संसारको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
मध्य अप्रिलमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :4::54 हुन्छ र सूर्यास्त समय १ 18:१:16 हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :4::37 हो र सूर्यास्तको समय लगभग १:18: is00 छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (अप्रिलको पछिल्लो)
साप्पोरो २.13.9..5.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 21.0mm (0 सेमी)
ओटारु २.13.3..4.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 21.1mm (0 सेमी)
Asahikawa २.14.5..2.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 18.7mm (1 सेमी)
Biei २.12.9..0.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 18.9mm (1 सेमी)
फुरानो २.13.5..1.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 19.9mm (1 सेमी)
Wakkanai २.9.2..3.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 19.2mm (2 सेमी)
अबाशिरी २.11.0..2.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 21.8mm (5 सेमी)
उटोरो २.10.4..1.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 37.8mm (14 सेमी)
नेमुरो २.8.9..1.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 32.0mm (1 सेमी)
Kushiro २.9.4..1.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 33.0mm (1 सेमी)
ओबिहिरो २.14.2..2.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 23.5mm (1 सेमी)
Hakodate २.13.6..4.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.28.6..XNUMX मिमी (-)
अप्रिल २,, २०१:: सप्पोरो टिभी टावर, सपोरो, होक्काइडोको अगाडि ओडोरी पार्कको फाउन्टेनमा अज्ञात व्यक्तिहरू = शटरस्टक
अप्रिल ,०, २०१:: निसेको गाउँमा डेट स्कीइ atमा हवाई दृश्य। होसेकोडो जापान = शटरस्टकमा स्की रिसोर्टहरूको लागि निसेको लोकप्रिय गन्तव्य हो
होक्काइडो अप्रिलको अन्तमा न्यानो हुनेछ। दक्षिण होक्काइडोबाट, चेरी ब्लास्म्स बदल्नमा शुरू हुन थाल्नेछ। जे होस्, यो अझै बिहान र साँझ एकदम चिसो छ। यदि तपाईं राती बाहिर जानुहुन्छ तपाईंलाई कोट वा जम्पर चाहिन्छ।
केहि ठूला स्की रिसोर्टहरू जस्तै Niseko, हिउँ उत्तरी ढलानमा रहन्छ। तपाईं अझै पनि जाडो का खेल आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
अप्रिलको अन्तमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :4::38 हुन्छ र सूर्यास्त समय १:18:२:28 हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :4:२१ हो, र सूर्यास्त समय १ 21:१२ तिर हो।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले अप्रिलको सुरूवातको लागि 2019th औं समय, अप्रिलको मध्यतिरको १th औं समय र अप्रिलको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरें।
"अप्रिल" मा फिर्ता